Kitra – «Ballon d’or 2017» : hisolotena an’i Afrika i Aubameyang sy i Mané | NewsMada
Kitra – «Ballon d’or 2017» : hisolotena an’i Afrika i Aubameyang sy i Mané
Namoaka ny anaran’ireo mpilalao 30 mirahalahy, hiady izay handrombaka ny “Ballon d’or 2017”, ny France Football. Ankoatra ireo efa kalazalahy eoropeanina, manana solotena roa ihany koa i Afrika.
Nampahafantarina ny rehetra, tamin’ny alatsinainy 9 oktobra lasa teo, ny anaran’ireo mpilalao 30 hiady ny “ballon d’or”, ho an’ity taona 2017 ity. Anisan’ireo, manana solotena hiatrika ny kaontinanta afrikanina, amin’ny alalan’ilay Senegaley, Sadio Mané, mpilalaon’ny Liverpool any Angletera ary ilay Gaboney, Pierre-Emerick Aubameyang, lohalaharan’ny Borussia Dortmund.
Marihina fa mitarika eo amin’ny famonoam-baolina, any amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Alemaina “bundesliga” i Aubameyang, ankehitriny. Ankoatra azy mirahalahy ireo, mbola hihazakazaka amin’ity fiadiana ny ho mpilalao mendrika eran-tany ity, ihany koa ilay Portiogey, Cristiano Ronaldo, avy amin’ny Real Madrid sy ilay Arzantin, Lionel Messi, irakiraka mpanafika ao amin’ny FC Barcelone. Heverin’ny rehetra fa mbola manana herijika matanjaka handrombahana izany, i Cristiano Ronaldo, izay mitarika eo amin’ny fampidiram-baolina eo amin’ny “ligue des champions d’Europe”, sy ny nahazoany izany. Raha tsiahivina, efa nandrombaka indimy izany “ballon d’or” izany ny lehilahy.
Mety ho very i Messi sy i Neymar Jr
Tsy manantena an’i Messi kosa ny rehetra noho ny vokatra miaka-midina, teo aminy. Anisan’ireo, arahin’ny rehetra maso ihany koa ilay Brezilianina, Neymar Jr, milalao ao amin’ny Paris St Germain. Tsy mbola tena hita misongadina aloha hatreto ny tovolahy, noho izy vao nifindra klioba.
Tsy misy afa-tsy telo kosa ny mpiandry tsatoby, hifaninana amin’ity dia ilay Slovenina, Jan Oblak, milalao ao amin’ny Atlético de Madrid sy ilay Espaniola, David De Gea ao amin’ny Manchester United ary ilay Italianina, Gianluigi Buffon, an’ny Juventus Turin. Anisan’ireo mpilalao, nisongadina, ihany koa saingy tsy tafiditra ao anaty lisitra hanaovana ny safidy ireo Frantsay mirahalahy, i Paul Pogba sy i Raphaël Varane. Eo koa ilay Silianina, Arturo Vidal, irakiraky ny Bayern de Munich. Tsy hita tabilao ihany koa ireo mpilalaon’ny Leicester City, dia ilay Anglisy, Jamie Vardy sy ilay Alzerianina, Riyad Mahrez. Ho fantatra amin’ny volana desambra, izay hahazo ny «Ballon d’or 2017».